Hira ara-pilazantsara : manentana ny rehetra hiara-hidera ny Exo | NewsMada
Hira ara-pilazantsara : manentana ny rehetra hiara-hidera ny Exo
Na efa fandaharam-potoana voalahatra hatry ny elaela aza, tsapa fa mifanandrify amin’ny zavatra ilain’ity firenena ity ny fahatongavan’ny Exo, tarika mpihira ara-pilazantsara mitety izao tontolo izao, eto amintsika. Tsy inona moa izany fa ny fanatonana an’Andriamanitra, manoloana ny olana ankehitriny.
Ankoatra ny fiderana an’Andriamanitra, anisan’ny hibahan-toerana amin’ny kaonseritra iarahana amin’izy ireo ny fangatahana amin’Andriamanitra ny hampanjakana ny fahamarinany sy ny fahatsarany eto amin’ny firenena. Hotanterahina ny zoma izao, etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina, io fampisehoana io.
Hanomboka amin’ny fito ora hariva ny kaonseritra. Araka izany, ho alina vao ho tapitra ny fiarahana amin’ny mpankafy eto an-dRenivohitra. Noho izany, efa nanomana fiara fitaterana ny mpikarakara mba tsy hanahirana ny rehetra ny fodiana. Tsy vitsy mantsy ireo maniry mafy ny handray anjara amin’ity fiaraha-midera an’Andriamanitra ity, saingy mety ho voasakan’izay fomba hiverenana mody izay.
Marihina fa tany Toamasina no nanatontosan’izy ireo ny seho voalohany, ny alahady 29 avrily teo. Tsiahivina fa efa nisy ny fiaraha-misakafo arahina fiderana, nataon’ny tarika Exo, ny talata teo tetsy amin’ny Studio Arena Ivandry. Afa-po tanteraka ireo izay tonga teny. Teo koa ny atrikasa, tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina, nahitana fifampizarana mikasika ny fiainam-panahy amin’ny maha kristianina sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.
Tafiditra ao anatin’ny fitetezam-paritra aty amin’ny ranomasimbe Indianina ny fandalovan’ny Exo eto amintsika. Miara-miasa akaiky amin’ny mpikarakara izany ny fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly (FMMB).